Izindawo ezihamba phambili ze-Textsheet (2020) - Izindawo zamahhala nezikhokhelwayo - Uhlu
Izindawo ezihamba phambili ze-Textsheet (2020) - Ezamahhala nezikhokhelwayo
I-Textsheet yayiyingosi yokufunda e-inthanethi lapho abafundi babengaxazulula ukungabaza kwabo maqondana nanoma yimiphi imibuzo ababenayo. I-Textsheet isize abafundi ekuqedeni umsebenzi wabo wesikole. I-Textsheet yayiyingosi ethandwayo yokufunda ngoba abafundi bangathola izixazululo mahhala. Kepha ngeshwa, i-Textsheet ayisasebenzi. Ngakho-ke siletha ezinye zezindlela ezinhle kakhulu ze-Textsheet ukwenza umsebenzi wakho ube lula.
Esizukulwaneni sanamuhla lapho noma yini nayo yonke into itholakala nge-inthanethi, abafundi bakuthola kulula ukufinyelela kuzo zonke izinto zokufunda online ngaphandle kokuthenga izincwadi eziningi zezinsizakusebenza. Amakilasi aku-inthanethi noma izifundo sezande kakhulu kulezi zinsuku. Ukuphothula umsebenzi wesikole noma izabelo kungenye yezinto ezikhathaza kakhulu noma yimuphi umfundi. Impilo yomfundi ingenziwa ibe lula uma izinsiza zomsebenzi wabo wesikole zitholakala online. Ngakho-ke manje kunezindawo eziningi ze-E-learning ezisiza abafundi ekuqondeni imiqondo kangcono.
Ufuna Isaphulelo ku Windows 10? Uma kunjalo Faka isicelo se- Windows 10 Isaphulelo Somfundi
Kungani sidinga ezinye izindlela ze-Textsheet?
I-Textsheet kwakuyikhothali yokufunda eyintandokazi yabafundi enokufinyelela kwamahhala kuyo yonke imithombo. Ukuba ngenye yamawebhusayithi ajwayelekile asetshenziswa ngabafundi, ngenkathi isuswa ngenxa yezimangalo ze-copyright zikaChegg abaningi basala bedidekile. Abafundi abaningi manje bafuna iwebhusayithi entsha ewusizo engasiza ngezifundo zabo.
Izinzuzo zezingosi zokufunda eziku-inthanethi:
Izindlela zokufunda zendabuko azisebenzi kahle ekugcineni lokho okufundiwe. Amawebhusayithi e-E-learning asebenza njengemihlahlandlela kubafundi abanobunzima bokuqonda noma yimuphi umqondo. Ukufunda manje sekuhlekiswa ngosizo lwamathuluzi ahlukahlukene amasha. Kusuka emakilasini aku-inthanethi ukubuza izimpendulo ezibalulekile ezivivinyweni, abafundi bangakwazi ukufinyelela kuzinsizakusebenza ezahlukahlukene kanye nesilabhasi yasekolishi. Ekufundeni oku-inthanethi, abafundi banenketho yokukhetha lokho abafuna ukukufunda futhi bakukhokhele lokho kuphela. Lezi zindlela zokufunda zikhonjisiwe ukuthi ziyasebenza kule minyaka edlule. Lokhu kuholele ekwethulweni kwezingosi eziningi zokufunda emhlabeni jikelele.
Amawebhusayithi amaningi asebenza njengezindawo zokufunda eziku-inthanethi. Nazi ezinye izindlela ezinhle kakhulu ze-Textsheet ongazama ngazo ngo-2020.
Ezinye izindlela ezihamba phambili ze-Textsheet (2020)
1. IQhawe Lesifundo
I-Course Hero iyipulatifomu yokufunda eku-inthanethi lapho abafundi bekwazi ukufinyelela ezintweni zokufunda zezifundo ezahlukahlukene. Lezi zinsizakusebenza zinikelwa ngumphakathi wabafundi nabeluleki. Banikela ngezinkinga zokuzijwayeza, imihlahlandlela yokufunda, ama-eseyi, amakilasi evidiyo kubafundi ngabafundisi abahlukahlukene kanye nezimpendulo. I-Course Hero ayiqinisekisi umnikazi we-copyright yanoma iyiphi into elayishwe kuwebhusayithi. Lokhu kuholela ekusetshenzisweni kabi kwezinsizakusebenza zabanikazi be-copyright. Umthetho i-Digital Millennium Copyright Act uthi ukususa noma yikuphi okuqukethwe uma kubikwa njengokuphulwa kwe-copyright.
Imininingwane yomuntu siqu yabo bonke abasebenzisi be-Course Hero efana negama, i-imeyili, ikheli lobuhlakani iboniswa ekhasini labo. Lokhu kungadala izingqinamba zobumfihlo ngokusetshenziswa okungagunyaziwe kwemininingwane yomuntu. Izinsizakusebenza ezithunyelwe ku-Course Hero zifaka amaphepha emibuzo nezixazululo zezivivinyo ezedlule. Njengoba abafundi bevunyelwe ukuthumela imibuzo ngemuva kokuhlolwa, abafundi abaningi bakopisha umsebenzi wesikole nezixazululo ezivela kuwebhusayithi
24/7 ukufinyelela izinsizakusebenza
Izinto ezingaphezu kwezigidi ezingama-40 zezifundo eziqondene nezifundo ezithile
Imininingwane yomuntu siqu yabo bonke abasebenzisi iputshukile
Abafundi bayakopela ezivivinyweni
I-Course Hero inikeza uhlelo oluyisisekelo lwamahhala lapho abasebenzisi bangalayisha khona izinsiza zabo futhi bathole ukufinyelela ezintweni zokusebenza. Izinhlelo ze-Premium zinezinketho ezi-3,
Ubulungu bonyaka be- $ 9.95 ngenyanga
Uhlelo lwekota lwe- $ 19.95 ngenyanga
Uhlelo lwanyanga zonke lwe- $ 39.95 ngenyanga
IChegg yinkampani yezobuchwepheshe bezemfundo, enikezela ngezincwadi ezidijithali, zomzimba, zokufundisa ama-video, njll. Kunabantu ababhalisile ababalelwa ezigidini ezi-2.9 ku-Chegg Services kusukela ngoMashi 2020. Ngaphandle kwezincwadi zokufunda nezinsizakalo zekilasi eziku-inthanethi, abafundi bangafuna izifundi kanye nama-internship. UChegg akagcini ngokuhlinzeka ngezinsizakusebenza zokufunda eziku-inthanethi kepha umuntu angaqasha izincwadi kusuka kuwebhusayithi.
Kube nezinsolo zokuthi abafundi ngosizo lukaChegg, bathola ukufinyelela emaphepheni emibuzo alayishwe ngabafundi, futhi bakopela ezivivinyweni zabo. Futhi, izinsizakalo zokwabelana ngamafayela ezinikezwa uChegg zibikwa ukuthi ziyinkinga njengoba kungukwephula ubuqotho bezemfundo.
Qasha izincwadi zomzimba
Izixazululo ezivela emanyuvesi angaphezu kwe-6,400
Ukusebenza kanye neScholarship kuyatholakala
Inkonzo yokwabelana ngamafayela eyinkinga
Ukubhaliswa okuyisisekelo ku- $ 14.95 ngenyanga.
$ 30 ngenyanga ukufinyelela okugcwele
I-Coursera ingumhlinzeki wezifundo waku-inthanethi ovulekile waseMelika. Isungulwe ngoprofesa besayensi yamakhompyutha baseStanford University, i-Coursera inikeza amadigri, ubuchwepheshe, izifundo, njll. Izifundo ezinikeziwe zenziwa ngosizo lwamanyuvesi ahlukahlukene kanye nezinye izikhungo zemfundo ezifundweni ezahlukahlukene. Izifundo e-Coursera cishe zingamasonto amane kuya kwayishumi nambili ubude futhi amakilasi angamahora elilodwa kuya kwamabili ezinkulumo zevidiyo ngesonto ezichazwe kabanzi futhi eziwusizo kubafundi. Ibuye ibe nezifundo ezifika ku-104 lapho kudingeka khona lapho abafundi bengathola ukufinyelela kuzo zonke izinto maqondana nezifundo kusengaphambili futhi kungaqedwa ngokwesikhathi nezimfuneko zomfundi.
Izifundo ezinikezwa e-Coursera zinikela kuphela ngezitifiketi zokuqedela kubafundi. Amabanga awabelwe njengoba kwenzeka emakolishi. Izinsizakusebenza ezinikezwa abafundi ngeke zitholakale uma isifundo sesiqediwe futhi isitifiketi sikhishiwe
Amakilasi amade anemininingwane
Izifundo ezifunwayo ziyatholakala
Kunikezwa ne-masters degree ephelele
Awekho amamaki anikezwa ezifundweni
Lapho nje izifundo seziphothuliwe, awukwazi ukufinyelela ezintweni ezisetshenzisiwe
$ 39-79 ngenyanga okubhaliselwe
Izinsuku ezingu-7 zesilingo samahhala somsebenzisi omusha
Ngosizo lwamathuluzi okufunda ahlukahlukene nezindlela ezintsha zokufunda, abafundisi be-Quizlet ngamakhadi e-flashcards, imidlalo, kanye nokuhlolwa. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-50, iba phakathi kwamawebhusayithi aphezulu angama-50 e-US Kusiza ngekhanda kusetshenziswa ama-Flash Cards, Gravity, izivivinyo zokubhala, izivivinyo zeSpeller, njll. abafundi ekugcineni lokho abakufundile. Le ndlela ikhonjiswe ukuthi iyasebenza kakhulu phakathi kwabafundi
Njenganoma iyiphi enye ingosi, abafundi basebenzisa kabi iQuizlet ukuthola amaphepha emibuzo ahlukahlukene futhi bakhohlise ezivivinyweni. Inesikhathi sesivivinyo sezinsuku eziyi-15 ngemuva kwalokho okumele kukhokhwe imali yokubhalisa ukuthola izinsizakalo
Isayithi lezemfundo lase-US elikhula ngokushesha ngo-2015
Amakilasi abukhoma nemidlalo
I-Quizlet's API isiyatholakala isikhathi eside
Abafundi batholakala ukuthi bakhohlisa
Imodeli engenazo izindleko ibiza u- $ 35.88 ngonyaka
I-Quizlet Plus ingeza ezinye izici ezibiza u- $ 47.88 ngonyaka
5. IBhodi leKholeji
Inhlangano engenzi nzuzo esiza ekuphatheni ukuhlolwa kwezikhungo ezehlukene zemfundo. IBhodi Lekolishi linikezela nangezinsizakusebenza zabafundi, abazali namakholeji ezindaweni ezahlukahlukene zemfundo. IBhodi Lekolishi lisebenza njengosizo lwezezimali kubafundi nasemakolishi ababuthaka ngokwezimali
IBhodi Lekolishi lithole ukugxekwa okukhulu ngemali yabo ephezulu yokuhlolwa nokuncika ngokweqile ku-syllabus ejwayelekile engagxili ekuthuthukiseni ulwazi lwabafundi. Kuke kwaba nemibiko yokudayiswa kwemininingwane yabafundi kwiKholeji Board
Inikeza ngosizo lwezezimali
Kunikezwa ikharikhulamu eningiliziwe
Imali yokubhalisa engu- $ 26
Izinkokhelo ezingeziwe ekuhlolweni ngakunye okuthathiwe
I-StudyLib ingenye ye-Textsheet enikezela ngezabelo ezahlukahlukene ezixazululwe nomsebenzi wesikole. Lokhu okuqukethwe kuwebhusayithi ye-Studylib kungalandwa futhi kutholakale nganoma yisiphi isikhathi. Unomphakathi lapho abafundi besizana ngokulayisha izinto zabo zokufunda.
Wonke umfundi angakha iqoqo lakhe lezinto zokusebenza ngakho-ke akunankinga yokukuthola njalo lapho ufuna ukubhekisa kukho. Okuwukuphela kokwehla ukuthi i-portal ayiyona ingcweti njengezinye izingosi zokufunda eziku-inthanethi.
Iqoqo lakho lezinto zakho zokufunda
Kwakhiwa umphakathi wabafundi
Enye indlela eshidi lombhalo evumela abasebenzisi ukuthi baxhume kuwebhusayithi yabo kusuka noma yikuphi nakuyo yonke indawo. Ungasebenzisa noma iyiphi idivayisi ehlakaniphile njengamaselula noma amaphilisi ukufinyelela izinto. Ukubhaliswa kwamahhala kungenziwa futhi abafundi bangafinyelela kwizifundo eziyisisekelo
Uma ufuna izifundo ngaphandle kwalezo ezitholakala emakolishi, iSkooli akuyona inketho ekahle njengoba inqunyelwe kwizinsizakusebenza. Amathuluzi okufunda asetshenzisiwe ayisisekelo hhayi okuthile okuphuma ebhokisini
Bhalisela mahhala bese ubhaliswa
Ingxoxo eyodwa kuya kweyodwa nabafundisi
Kukhawulelwe kwisilabhasi yasekolishi
Amathuluzi okufunda anqunyelwe
$ 10 ngesonto kuya ku- $ 30 ngesonto
Ngenye yezindawo zokuxhumana ezenziwa lula kakhulu, abafundi bangasebenzisa le webhusayithi kalula. Kusetshenziswa kakhulu kubafundi ababhekise kwisilabhasi yase-US. Ingasetshenziswa njengomthombo omuhle wolwazi ngaphandle kwezinto zokufunda zesikole. Bobabili abafundi nabafundisi banikela kuzinsizakusebenza ezikhona ezenza kube ukufunda komphakathi. Usizo luzonikezwa abafundi maqondana nezifundo ezahlukahlukene. Usizo lomsebenzi wasekhaya luyatholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezifundo kusuka kwiMathematics kuya kwezobuCiko.
Uhlangothi lwe-loop ukuthi luqukethe isikhangiso esiningi kakhulu okwenza kube nzima ukusisebenzisa. Ngaphandle kosizo lomsebenzi wesikole, inesigaba semibuzo lapho abafundi bangaxoxa nabafundisi futhi baxazulule ukungabaza kwabo
Impendulo yombuzo iyatholakala
I-interface yayo elula yomsebenzisi yonga isikhathi
Isikhangiso esiningi kakhulu
Kakhulu kutholakala isilabhasi yase-US kuphela
Uhlelo oluyisisekelo lwamahhala
Izinhlelo ze-Premium kusuka ku- $ 4 ngenyanga kuya ku- $ 8 ngenyanga
9. Isitholi sencwadi
Iwebhusayithi yokufunda lapho ungathola khona izincwadi ezingamasekeni. Izinhlobo ezahlukahlukene zezincwadi nezinye izinto zokufunda zingatholakala ngentengo engabizi. Kukhawulelwe ekuqashweni nasekuthengweni kwencwadi ebonakalayo. Ungathengisa futhi nezincwadi zakho osuzisebenzisile kuwebhusayithi. Lokhu kusebenza njengomphakathi wabafundi lapho umuntu angathenga khona izincwadi ngentengo ephansi ngokuqhathaniswa.
Le akuyona ingosi yokufunda yeklasi yevidiyo yabafundi. Izincwadi kuphela ezingalethwa futhi zithengiswe nge-Bookfinder
Izincwadi zokufunda ngentengo eshibhile
Ukuqhathanisa amanani kulula
Inikelwe ikakhulukazi ekutholeni izincwadi ezifundwayo
Amakilasi aku-inthanethi awatholakali
Amanani ezincwadi athengwe nge-bookfinder ancike encwadini nasendlini yokushicilela.
Usizo lwephepha akuyona ingosi yokufunda yawo wonke umuntu. Ngokuyinhloko i-Ph.D. abafundi abahlinzeka ngamaphepha ahlukile ocwaningo nezinye izinsizakalo. Lokhu akukhawulelwe kuphela ocwaningweni lomuntu ngamunye, ucwaningo lwamaqembu lungenziwa futhi. I-Ph.D. Abafundi badinga ukwenza amaphepha amaningi ocwaningo. I-PaperHelp inikeza amaphepha ayisampula ngosizo lapho abafundi bengathola umbono maqondana nanoma yisiphi isifundo.
Abafundisi abahlukahlukene bazokusiza ukuthi uqonde isihloko okwenziwa ngaso ucwaningo. Abafundi bangasebenzisa insizakalo yePhephaHelp uku-oda amaphepha ocwaningo online futhi izolethwa kungakapheli isikhathi.Kepha lawa maphepha ocwaningo awekho kuwo wonke umuntu. I-PaperHelp ikhawulelwe ku-Ph.D. Kuphela. abafundi nabafundisi
Abafundi bangazenzela amaphepha abo ocwaningo
Ucwaningo lweqembu lungenziwa
Kukhawulelwe ku-Ph.D. abafundi
$ 12 kokuyisisekelo nokwenyuka okususelwa kwinani lamakhasi nesigaba socwaningo.
1Q. Ngabe zonke lezi ezinye izindlela ze-Textsheet ziphephile?
Iminyaka:Ezimweni kwamanye amawebhusayithi, kube nemibiko yokwephulwa kwe-copyright yomnikazi wangempela. Lapho umsebenzisi elayisha idokhumenti akuqinisekisiwe ukuthi ungumnikazi wangempela wedokhumenti yini
2Q. Ngabe i-Textsheet isasebenza?
Iminyaka:Ayikho i-Textsheet ebiyingosi yokufunda yamahhala enikeze ukufinyelela kuzinsizakusebenza ezahlukahlukene kepha ayisasebenzi.
3Q. Kungani i-Textsheet ivaliwe?
Iminyaka:Abafundi abaningi bebesebenzisa i-Textsheet njalo. Beyisebenzisa ngokungemthetho imininingwane evela kwamanye amasayithi. I-Textsheet yehliswe yingosi eku-inthanethi uChegg ethi i-Textsheet ikopishe izinto zabo futhi bayisebenzisa njengeyabo. Ngenxa yesimangalo se-copyright sika-Chegg, i-Textsheet isusiwe.
Amawebhusayithi ashiwo ngenhla angenye yezindawo zokufunda ezithandwa kakhulu ezingasebenza njengezinye izindlela ze-Textsheet. Abafundi abaningi babencike kwi-Textsheet ngezinsizakusebenza zabo. Ngemuva kokuthi i-Textsheet iyeke ukusebenza, isidingo senye iwebhusayithi yokufunda sanda. Lezi zingosi zisizile kakhulu kubafundi abafuna izinto zokufunda ukuze baqonde noma yisiphi isifundo. Amawebhusayithi ahlukene anokuhluka okuhlukile kwezihloko. Ngokuya ngokuthi ufundani nezinhlelo ezitholakalayo, kungakhethwa izingosi zokufunda.
Thola Isivivinyo Samahhala Sezinsuku ezingama-30
I-Adobe Creative Cloud yabafundi